Rufu rwaJesu Rwaswedera, Nyaya Yekutsvaka Chinzvimbo Inotangazve
Nyaya Yekutsvaka Chinzvimbo Inotangazve
MATEU 20:17-28 MAKO 10:32-45 RUKA 18:31-34
KUBATSIRA VAAPOSTORA PANYAYA YOKUDA UKURU
Jesu nevadzidzi vake vava kubuda muPereya vari parwendo rwavo rwokuJerusarema. Vanoyambuka Rwizi rwaJodhani pedyo neJeriko, vaine vamwe vari kuendawo kuPaseka ya33 C.E.
Jesu ari kufamba ari pamberi pevadzidzi vake, achida kusvika muguta Paseka isati yatanga. Asi vadzidzi vari kutya. Nguva yakapfuura, Jesu paakanga ava kuda kuenda kuJudhiya achibva muPereya anzwa nezverufu rwaRazaro, Tomasi akati kune vamwe vake: “Ngatiendeiwo, kuti tife naye.” (Johani 11:16, 47-53) Saka vadzidzi havangamborega kutya nokuti kuenda kuJerusarema kunogona kuvapinza munyatwa.
Jesu anoenda nevadzidzi vake pavo voga kuti agare avazivisa zvichaitika kwavari kuenda achiti: “Tiri kukwira kuJerusarema, uye Mwanakomana womunhu achaiswa kuvapristi vakuru nevanyori, vachamutongera rufu, uye vachamuisa kuvanhu vemamwe marudzi kuti vamuseke uye kuti vamuzvambure uye kuti vamuroverere, asi achamutswa pazuva rechitatu.”—Mateu 20:18, 19.
Aka kava kechitatu Jesu achiudza vadzidzi vake nezverufu rwake norumuko. (Mateu 16:21; 17:22, 23) Asi iye zvino ari kuti achaita zvokurovererwa padanda. Vanomuteerera, asi havanzwisisi zvaari kutaura. Pamwe vari kutarisira kuti vaIsraeri vachadzorerwa umambo hwavo pasi pano, ivo vova nezvigaro zvinokudzwa muumambo ihwohwo pamwe naKristu.
Mumwe ari kufambawo navo ndiamai vevaapostora vaviri Jakobho naJohani, avo vanofanira kunge vari Sarome. Jesu akapa vaapostora vaviri ava zita rinoreva kuti “Vanakomana Vokutinhira,” izvo zvinoratidza pachena kuti vanhu vanokurumidza kugumbuka. (Mako 3:17; Ruka 9:54) Varume ava vava nenguva vachiratidza kuti vanoda kuzova nezvinzvimbo zvepamusoro muUmambo hwaKristu. Amai vavo vanozviziva. Saka nhasi vanoenda pana Jesu vomugwadamira, vachimukumbira kuti avaitirewo chimwe chinhu. Jesu anovabvunza kuti: “Munodei?” Ivo voti: “Ndinokumbirawo kuti vanakomana vangu ava vaviri vagare, mumwe kuruoko rwenyu rworudyi uye mumwe kuruboshwe rwenyu muumambo hwenyu.”—Mateu 20:20, 21.
Kutaura zvazviri chikumbiro ichi chiri kubva kuna Jakobho naJohani. Sezvo atorondedzera kunyadziswa kwaachaitwa, Jesu anoti kwavari: “Hamuzivi zvamuri kukumbira. Munogona here kunwira mukapu yandava kuda kunwira?” Ivo vanomupindura kuti: “Tinogona.” (Mateu 20:22) Kunyange zvakadaro, vangangove vasiri kuziva kuti zvavari kutaura zvinorevei.
Zvisinei, Jesu anovaudza kuti: “Chokwadi muchanwira henyu mukapu yangu, asi izvi zvokugara pasi kuruoko rwangu rworudyi nokuruboshwe rwangu handisi ini ndinopa izvozvo, asi ndezvevaya vakazvigadzirirwa naBaba vangu.”—Mateu 20:23.
Vamwe vaapostora gumi pavanonzwa nezvechikumbiro chaJakobho naJohani vanotsamwa nazvo. Kungava here kuti Jakobho naJohani ndivo vaiva pamberi panharo dzakamboitwa dzokuti ndiani mukuru kune vamwe? (Ruka 9:46-48) Kunyange kana zvisiri izvo, chikumbiro ichi chabudisa pachena kuti vaapostora 12 ava havana kushandisa zano raJesu rokuti vazvibate sevaduku. Shungu dzokuda kuva nezvinzvimbo zvepamusoro dzichiripo.
Jesu anosarudza kugadzirisa nyaya iyi yamuka zvekare uye kufungirana zvakaipa kwairi kukonzera. Anodana vaapostora vake 12 ovapa zano rerudo achiti: “Munoziva kuti vaya vanonzi vanotonga marudzi vanozviita madzishe paari uye vakuru vavo vanoshandisa simba paari. Izvi hazvina kudaro pakati penyu; asi munhu wose anoda kuva mukuru pakati penyu anofanira kuva mushumiri wenyu, uye munhu wose anoda kuva wokutanga pakati penyu anofanira kuva muranda wevamwe vose.”—Mako 10:42-44.
Jesu anovaudza kuti vamutevedzere. Anotsanangura kuti: “Zvakafanana noMwanakomana womunhu asina kuuya kuzoshumirwa, asi kuzoshumira nokupa mweya wake kuti uve rudzikinuro mukutsinhana nevazhinji.” (Mateu 20:28) Jesu ava nemakore anenge matatu achishumira vamwe. Uye achatozviita kusvika pakufira vanhu! Vadzidzi vanofanira kutevedzera Kristu pakuva nechido chokushumira vamwe kwete kushumirwa ivo, kuva vaduku kwete kuva nezvinzvimbo zvepamusoro.
Jesu anoita sei kuti vadzidzi vake vagadzirire zvichaitika kwavari kuenda?
Vaapostora vaviri vanokumbirei kuna Jesu, uye vamwe vaapostora vanonzwa sei nezvazvo?
Jesu anobatsira sei vaapostora panyaya yavo yokuda zvinzvimbo zvepamusoro?
Tingazvininipisa sei pakugarisana kwatinoita nevamwe?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Nyaya Yekutsvaka Chinzvimbo Inotangazve